जाडोमा दुःख दिने हाइपोथर्मियाबाट जोगियौँ:: Naya Nepal
जाडोमा दुःख दिने हाइपोथर्मियाबाट जोगियौँ
शरीरमा तापक्रम कम भएर उत्पन्न हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी कडा समस्यालाई हाइपोथर्मिया भनिन्छ । अर्थात् शरीरको भित्री तापक्रम ३५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा कम भएको अवस्था हाइपोथर्मिया हो ।
यसले शरीमा विभिन्न रोगको संक्रमणलाई सहज बनाई, प्रतिरोधी क्षमता घटेर जाने भएकाले कतिपय अवस्थामा ज्यान नै जोखिममा पर्ने गर्छ । हाइपोथर्मियाबाट बालबालिका बढी पीडित हुने गरेका छन् ।
सामान्यतया चिसोको सम्पर्कमा आउँदा शरीरले ताप उत्पादनको तुलनामा बढी मात्रामा न्यानोपना गुमाउने गर्छ । चिसोमा धेरै समयसम्म बस्दा शरीरमा सञ्चित शक्ति उपयोगमा आउँछ । परिणामस्वरूप हाइपोथर्मिया हुन्छ ।
जाडोयाममा यो समस्या बढी हुने गरे पनि पसिनाले निथ्रुक्क भिज्दा पनि हाइपोथर्मिया हुन सक्छ । हाइपोथर्मियालाई चार किसिममा विभाजन गरिएको छ ।
हलुका : ९० देखि ९५ डिग्री फरेनहाइट (३२ देखि ३५ डिग्री सेल्सियस)
मडरेट : ८२ देखि ९० डिग्री फरेनहाइट (२८ देखि ३२ डिग्री सेल्सियस)
गम्भीर : ६८ देखि ८२ डिग्री फरेनहाइट (२० देखि २८ डिग्री सेल्सियस )
६८ डिग्री फरेनहाइट : २० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम
शरीरमा आवश्यक तापक्रम कायम राख्नका लागि मस्तिष्कले धेरै तरिका अपनाइरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणले गर्दा ताप उत्पादन हुनुको सट्टा ह्रास आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ रोगको कारणले समेत शरीरको तापमा कमी आउन सक्छ । जसले गर्दा शरीरको तापक्रम जुनसुकै समय र अवस्थामा पनि प्रभावित हुन्छ । यसलाई सेकेन्डरी हाइपोथर्मिया भनिन्छ ।
साधारण क्लिनिकल थर्मोमिटरले ३४.४ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम सही रूपमा नाप्न सक्दैन । शरीरको भित्री तापक्रम थाहा पाउनका लागि विशेष किसिमको कम तापक्रम नाप्ने थर्मामिटर आवश्यक हुन्छ ।
हाइपोथर्मिया भएको व्यक्तिको मुटुको धड्कन दर अन्त्यन्तै कम हुन्छ । त्यसैले नाडीको दर पहिचान गर्न लामो समय लाग्न सक्छ । शरीरको तापक्रम सामान्यको दाँजोमा दुईदेखि चार डिग्रीसम्म कम हुँदा शरीर तीव्र गतिमा काम्न थाल्छ ।
शरीरको तापक्रम ३२ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा कम हुँदा जिउ काम्न बन्द हुन्छ ।
बोल्न असजिलो हुने, सोच्नमा समस्या आउने, छाला निलो हुँदै जाने, हिँड्न समस्या हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । रक्तवाहिनी नली खुम्चिने हुँदा शरीर पहेँलो हुने र औँला, ओठ, कानमा निलोपना देखिन्छ ।
कडा हाइपोथर्मिया भएमा बेहोस हुने हुन्छ । सास र नाडीको चालमा पनि गडबडी देखिन्छ । शरीरको तापक्रम घट्दै जाँदा घातक हुने हुँदा बिरामीको एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शरीरमा तापक्रम कम हुँदा अन्य समस्या पनि देखिने भएकाले हाइपोथर्मियाको तुरुन्त उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नवजात शिशु र बालबालिकालाई विशेष स्याहार गर्नुपर्छ । चिसो हावा लाग्न दिनुहुँदैन । बालबालिकालाई न्यानो पारेर राख्नुपर्छ । यदि तापक्रम निकै घटेमा छिटो उपचारका लागि चिकित्सककोमा जानुपर्छ ।
चाडपर्वको समयमा सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चाडपर्वको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
धार्मिक कार्यक्रममा सहभगी हुँदा बढीमा २५ जना मात्रै भेला हुन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । देवी देवताका मुर्ति र धेरै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामाग्री नछुन पनि मन्त्रालयको सुझाव छ । पैसाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
ज्वरो, खोकी वा स्वासप्रस्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरु, ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति, १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु, मधुमेह, क्यान्सर, मुटुरोग, उच्चरत्ततचाप, मिर्गौला, कलोजो सम्बन्धी समस्या भएका, दम लगायत अन्य स्वास प्रस्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरु, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरु, सरिरमा मेडिकल उपकरणहर राखेका व्यक्तिहरु, हालसालै सर्जरी गरेका व्यक्तिहरु र पछिल्लो १५ दिन भित्र सबै प्रकारका रोगको उपचारबाट निको भएका व्यक्तिहरु उच्च जोखिममा रहेकोले घर परिवार भन्दा बाहिरको भेलामा सहभागि नहुन पनि प्रवक्ता गौतमले अनुरोध गरे ।
राजेश मानन्धरको कोभिड–१९ कार्टुन सङ्ग्रह सार्वजनिक
कलाकार राजेश मानन्धरको कोभिड–१९ कार्टुन सङ्ग्रह आजदेखि बजारमा आएको छ । कोरोना भाइरस भनेको के हो ? यसको सङ्क्रमणका लक्षण, जोखिम वर्ग, कसरी सङ्क्रमणबाट बच्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डबारे कृतिमा सन्देश दिइएको छ । लकडाउनमा बालकदेखि वृद्धसम्मलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको सङ्ग्रह काठमाडौं महानगरपालिका–७ ले प्रकाशन गरेको हो ।
आज आयोजित कार्यक्रममा कामपा–७ का वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डङ्गोलले उक्त कृतिको विमोचन गर्दै कोभिडले सबै पक्षलाई प्रभाव पारेको समयमा कार्टुनिष्टले पनि समयसापेक्ष विषयवस्तुलाई सिर्जनामार्फत सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि चन्द्रकान्त पण्डित, निजी विद्यालयका तर्फबाट पूर्ण रावल, नेपाल जेसिजको उपाध्यक्ष शोभा खरेललगायतले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सर्वसाधारणलाई कसरी सामाजीकरण गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे कृति केन्द्रित रहेको विचार व्यक्त गरे ।
लामो समयदेखि विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा उत्कृष्ट कार्टुन निर्माण गरेका कलाकार मानन्धरले कोभिडबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सन्देशमूलक सोचका साथ समाजमा केही सूचना वा शिक्षा प्रदान गर्न कृति प्रकाशन गरेको जानकारी दिए ।
अब कपन र जोरपाटीमा पनि डिशहोम फाइबर नेटको सेवा
डिसहोम फाइबर नेटको सेवा कपन र जोरपाटीमा पनि उपलब्ध भएको छ । डिशहोमले यअघि फाइबर मार्फत ललितपुरको भैसेपाटी, काठमाडौंको बानेश्वर, तिनकुनेमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
गत माघमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पहिलो चरणमा गत फागुनबाट डिशहोमले भैसेपाटीमा इन्टरनेट सेवा दिन सुरु गरेको थियो ।
गाउँ गाउँमा फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा दिन असहज हुने भएकाले कम्पनीले स्याटेलाइट मार्फत पनि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । तर यसको लागि भने केही समय लाग्नेछ ।